Myanmar (or Burma) has been suffering from the recent flood disaster. This flood can be regarded as one of the worst disasters in decades. Most of the cities in 10 out of 14 States (or Divisions) are already under water now.
Reportedly, up to 150,000 people had been displaced or had their livelihoods affected due to this terrible flood. More torrential rain is expected in the coming days according to weather forecast.
This post has been posted in order to create the awareness for this flood disaster in Myanmar and let all countries across the world know that flood victims are in need of help for their survival and rehabilitation.
Moreover, people in disaster zones are dying everyday due to lack of food, clean water and basic necessities for life.
For people in Burma, you can check this Hashtag Page ‪#‎SupportMyanmar https://www.facebook.com/hashtag/supportmyanmar for more information and donation.
And also please copy and paste this post on your blog along with hash-tags below to create international awareness. Your help is one of the necessities for flood victims.
#SupportMyanmar ‪#‎SaveBurma ‪#‎SupportBurma ‪#‎SaveMyanmar ‪#‎Flood_Area ‪#‎Donate ‪#‎Help ‪#‎Myanmar ‪#‎Flood ‪#‎Flooding
For those who would like to donate from other countries, please visit to the link below..
From there, you can make your donation for Myanmar Flood Victims using your Master or Visa without any transaction fees. If you need more informations, please visit here.
Posted by သက်ဝေ at 4:00 PM
အ နီရောင် နှ င်းဆီ ပွ င့် များ နှ င့် အ တူ...
အ နီရောင် နှ င်းဆီ ပွ င့် များ နှ င့် အ တူ...
ရန်ကုန်သွား တောလား - ၂ - အဖေက ဘတ်စ်ကားစီးတာ အဆင်ပြေလား၊ ဘာဆိုင်မှာ ဘာတွေစားလဲမေးတယ်။ ခြင်လုံဇကာ ခြင်ထောင်လေးနဲ့အိပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ရန်ကုန်ဟာ ခြင်ထူ၊ ဖုန်ထူ၊ အရင်ကထက်တောင် ပို...
The Life of the Buddha – According to the Pali Canon - ဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်များအား မှီငြမ်းကိုးကားသည့် ကျမ်းများပေါ်တွင် မူတည်၍ အကြမ်းအားဖြင့် သုံးမျိုးခန့် ခွဲနိုင်သည်။ (၁) ကျမ်းရင်း ပါဠိတော် (Canonical Texts) ကိုသာ မ...
သတိရတယ်..... - ဆရာကျား(Big Bag ကျားပေါက်)ရဲ့ Anger Management အယ်လ်ဘမ်ထဲက ဒီသီချင်းလေး ကြိုက်တယ်...။ လောလောဆယ် ကျွန်မသီချင်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူသိခွင့် နားထောင်ခွင့်ရတ...
Touch Pool - ဘလော့ဂ်ဂါတွေစုပေါင်းရေးသားထားကြတဲ့ Feeling-92စာအုပ်ထဲမှာ ကျွန်မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာမူပါ။ စာအသစ်မတင်နိူင်သေးခင်မှာ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးရှင့်.... Touch Pool ========= ...
ချစ်ခြင်း၏ အပိုင်းအစများ (၂) - ညက ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်အပြင်သွားပြီး အပြန် ညဉ့်နက်တယ် ။ ပြန်ရောက်တော့ သမီးလေးက အိပ်နေပြီ ။ ရေချိုးခန်းဝင်ပြီး အ၀တ်အစားလဲပြီး ကိုချစ်မောင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ...
ငြိမ်းချမ်းခြင်းတေးသံ (ပါဠိversion) - ၁၃၈၁ခု မြန်မာနှစ်ဆန်း ၁ရက်နေ့မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပါဠိဘာသာပြန်ဖြစ်တယ်။ မြင့်မိုးအောင် ရေးဖွဲ့ပြီး နေနေနဲ့ ချန်းချန်းတို့ သီဆိုထားတဲ့ “ငြိမ်းချမ်းခြင်းတေးသံ”...
ပေါက်ပန်းဖြူသုတ် (Katuri flower Salad) - ပေါက်ပန်းဖြူ လေးတွေကို အထဲက ၀တ်ဆံလေးတွေခြွေ ရနွေးဖျောပြီး - ပုဇွန်ခြေါာက်မှုန်ှု - သံပုရာသီး - ငရုတ်သီးစိမ်း - ကြက်သွန်နီဆီချက် နဲ့ စိမ်းစိမ်း...
သံယောဇဉ်ချည်မျှင်နဲ့ချုပ်ခဲ့တဲ့စာအုပ် - ဘလော့ဂါ၉၂ယောက်တို့ရဲ့ ကဗျာ၊ အက်ဆေး၊ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုတိုတို့နဲ့ သီကုံးဖွဲနွဲ့ ရေးသားခဲ့တဲ့ Feeling-92 သုတ ရသစုံ စာအုပ် ထုတ်ခဲ့တာ ဒီနေ့ဆိုရင် တစ်လပြည့်...
အတွေးရောင်စုံ - ညမီးရောင် မှိန်မှိန်အောက် အိပ်မပျော် အတွေးတွေ နယ်ချဲ့လို့ ပတ်ကာပြေး အတွေးများကို အရောင်ခွဲ နာမည်တွေပေးခဲ့တယ်။ အညို နဲ့ အဝါရောင် အပြာ နဲ့ ပန်းနုရောင် အစိမ်း...
ခရမ်းသီးတောချက် ဆီပြန်ဟင်း - ဒီနေ့တော့ ဗီယက်နမ်ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ခရမ်းသီး အရှည်သီးလေးတွေကို ပုဇွန်ဆတ်ထုတ်လေးတွေနဲ့ တောချက်ဆီပြန်လေး ချက်ထားပါတယ်။ မာမာကတော့ ခရမ်းသီး တောချက် ချက်တိုင်း င...